Wasiir Dubbe oo shaaca ka qaaday in lasoo afjaray dagaalkii Beled-Xaawo - Caasimada Online
Home Warar Wasiir Dubbe oo shaaca ka qaaday in lasoo afjaray dagaalkii Beled-Xaawo
Wasiir Dubbe oo shaaca ka qaaday in lasoo afjaray dagaalkii Beled-Xaawo
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka wasaarada warfaafinta xukuumada federalka Soomaaliya, Cismaan Abuukar Dubbe oo shir jaraa’iid u qabtay wariyeyaasha ayaa si kulul uga hadlay dagaalkii cuslaa ee xalay illaa saaka ka dhacay gudaha degmada Beledxaawo.
Wasiir Dubbe ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada Xoogga dalka ee ku sugan xadka ay soo weerareen maleeshiyaad falaago ah iyo ciidamada difaaca Kenya oo wada socda, balse ay iska difaaceen, isaga oo sheegay in jab xoogan lagu gaarsiiyey dagaalkaasi.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in laga adkaaday falaagada ay soo abaabushay Kenya iyo ciidanka shisheeye ee duulaanka ku soo qaaday Beledxaawo, sida uu hadalka u dhigay.
“Ugu dambeyn falaagadii iyo ciidamada shisheeye ee la socday waxaan ugu bishaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga adkaaday,” ayuu yiri wasiirku.
Cismaan Abuukar Dubbe oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in ku dhowaad oo 100 askari oo ka tirsan jabhadda weerarka soo qaatay lagu qabtay dagaalka Beledxaawo, isaga oo shaaciyey in aysan soo bandhigi karin, maadaama ay yihiin wiilal Soomaaliyeed oo la qalday.
“Waan jeclaa in halkan aan ku soo bandhigno jabka gaaray iyo maxaabiista la qabtay oo ku dhow 100, balse inaan soo bandhigno waxaa noo diidaya xeerarka caalamiga ah ee dhanka maxaabiista,” ayuu sii raaciyey wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya.
Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in duulaanka lagu soo qaaday ciidanka Xoogga dalka ay waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ah, islamarkaana hoobiyeyaal iyo madaafiic uu sheegay in dalal shisheeye ay soo siyeen falaagada ay ku hoobteen xaafado ay dagan yihin dad rayid ah, wuxuuna xaqiijiyey dhimashada 5 caruur iyo hooyadood.
Xaaladda Beledxaawo ayaa hadda yare degan, balse waxaa weli dhaq-dhaqaaqyo iska soo horjeedo laga dareemayaan duleedka magaaladaasi oo ka tirsan gobolka Gedo.